HomeLifestyleRelationship﻿ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ရဖို့ သုံးသင့်တဲ့ နည်းပရိယာယ် ၁၀ ခု ﻿ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ရဖို့ သုံးသင့်တဲ့ နည်းပရိယာယ် ၁၀ ခု February 7, 20160comments OMCTC Posted in Relationship0ဒီနည်းလမ်းတွေထဲက သင်နဲ့သင့်တော်မယ့် အချက်အချို.ကို လိုက်နာရုံပါပဲ
1. ဂရုစိုက်မှုကို ပြပါ
ဒါကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ် ၊ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ. အချစ်ကိုရဖို့ဆိုရင် သူ့ကို ကိုယ်က ဂရုစိုက်ကြောင်း ပြရမှာပါ ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ လွယ်ပါတယ် ၊ သူမပြောစကားတွေကို ဂရုစိုက်နားထောင်ပေးတာမျိုး ၊ ဒါမှမဟုတ် ကြည်နူးဖွယ် လက်ဆောင်ပေးတာ ၊ ဂရုတစိုက်လုပ်ကိုင်ပေးတာ စတာမျိုးတွေပေါ့ ။ သူနဲ့ ချိန်းတွေ့ပြီးမှ ဒါတွေကို လုပ်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ အခါအခွင့်သင့်တိုင်း သင့်ဂရုစိုက်မှုကို ဖော်ပြပေးနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
2. သင်စိတ်ဝင်စားတာကို ဖော်ပြဖို့ မစိုးရွံပါနဲ့
အချို.တွေက သင်တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရာကို သူမမသိအောင် ဖုံးကွယ်ထားသင့်တယ်လို့ ဆိုကောင်းဆိုပါလိမ့်မယ် ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သင်တကယ် ရိုးသားသင့်ပါတယ်။
3. ယုံကြည်မှု ရှိပါ
ပထမဆုံး မှတ်သားထားရမှာက အမျိုးသမီးတွေဟာ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလွန်ကဲလွန်းနေတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးကို မနှစ်သက်ပါဘူး ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးကိုသာ အားကိုးလိုစိတ် ရှိကြပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေဟာ ကမ္ဘာမြေနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးကို အလိုရှိတက်ပါတယ်။ ငတုံးလို ဟန်ဆောင်ပါဆိုတာက သင်ဟာ တစ်ခါတစ်ရံ ပေါတောတောနဲ့ ချစ်စဖွယ် ကောင်းအောင် နေပြတာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ ။ အမြဲတမ်းဆိုရင်တော့ အထင်တောင် သေးသွားနိုင်ပါတယ်။
5. သင်ဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မလိမ်ပါနဲ့
သင်ဘယ်လို လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကောင်မလေးက သိထားသင့်ပါတယ် ၊ ဒါမှ ရေရှည်မှာ အဆင်ပြေမှာပါ။
6. အမျိုးသမီးဆန်တဲ့ သင့်အပြုအမူတွေကို သင်ကိုယ်တိုင် လက်ခံပါ
ဒါဟာ ဘာမှမမှားပါဘူး ၊ အမျိုးသားတွေမှာ အမျိုးသမီးဆန်တဲ့ အပြုအမူ စိတ်နေစိတ်ထား အနည်းငယ်ရှိတက်ပါတယ် ၊ ဒါဟာ သဘာဝပါပဲ ၊ ရှက်စရာမလိုပါဘူး။
7. အတိတ်ကို ချန်ထားခဲ့
သင့်အတိတ်မှာ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့ ၊ သူမနဲ့ အနာဂတ်သစ် စဖို့ကိုပဲ ပြင်ဆင်ထား သင့်ပါတယ်။
8. သူမကို အလေးထားပါ
အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ကို အမျိုးသားတွေက အလေးထား ဆက်ဆံတာကို လိုချင်ကြပါတယ် ။ သူမစကားပြောတဲ့အခါ သေချာနားထောင်ပြီး ပြန်လည်ဆွေးနွေးတာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်။
9. အဆက်အသွယ် ရအောင်လုပ်ပါ
သင့်အနေနဲ့ သင်ချဉ်းကပ်မယ့် ကောင်မလေးနဲ့ ရင်းနှီးမှုရဖို့ မလွယ်ကူဘူးဆို ၊ သူမ တက်တဲ့ သင်တန်းမျိုး လိုက်တက်ပြီး နီးကပ်မှုရအောင်လုပ်ပါ ၊ အခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ သူမနဲ့သင့်အကြား ဆက်သွယ်မှုရအောင် ကြိုးစားရပါမယ်။
10. ဖော်ရွေစွာ ဆက်ဆံပါ
သင့်အနေနဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ချိန်းတွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာ ဖော်ရွေစွာ ဆက်ဆံတက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ၊ သင်တို့ကြားမှာ ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်သွားတာမျိုး ဘယ်တော့မှ အဖြစ်မခံပါနဲ့
Ref: Myanmar Portal
ကောငျမလေးတဈယောကျကို ရဖို့ သုံးသငျ့တဲ့ နညျးပရိယာယျ ၁၀ ခု
ဒီနညျးလမျးတှထေဲက သငျနဲ့သငျ့တျောမယျ့ အခကျြအခြို.ကို လိုကျနာရုံပါပဲ
1. ဂရုစိုကျမှုကို ပွပါ
ဒါကတော့ ရိုးရှငျးပါတယျ ၊ အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ. အခဈြကိုရဖို့ဆိုရငျ သူ့ကို ကိုယျက ဂရုစိုကျကွောငျး ပွရမှာပါ ။ ဘယျလိုလုပျရမလဲ လှယျပါတယျ ၊ သူမပွောစကားတှကေို ဂရုစိုကျနားထောငျပေးတာမြိုး ၊ ဒါမှမဟုတျ ကွညျနူးဖှယျ လကျဆောငျပေးတာ ၊ ဂရုတစိုကျလုပျကိုငျပေးတာ စတာမြိုးတှပေေါ့ ။ သူနဲ့ ခြိနျးတှပွေီ့းမှ ဒါတှကေို လုပျရမှာ မဟုတျပါဘူး ၊ အခါအခှငျ့သငျ့တိုငျး သငျ့ဂရုစိုကျမှုကို ဖျောပွပေးနိုငျရပါလိမျ့မယျ။
2. သငျစိတျဝငျစားတာကို ဖျောပွဖို့ မစိုးရှံပါနဲ့
အခြို.တှကေ သငျတကယျစိတျဝငျစားတဲ့ အရာကို သူမမသိအောငျ ဖုံးကှယျထားသငျ့တယျလို့ ဆိုကောငျးဆိုပါလိမျ့မယျ ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ သငျတကယျ ရိုးသားသငျ့ပါတယျ။
3. ယုံကွညျမှု ရှိပါ
ပထမဆုံး မှတျသားထားရမှာက အမြိုးသမီးတှဟော မိမိကိုယျကို ယုံကွညျမှုလှနျကဲလှနျးနတေဲ့ ယောကငြ်ျားမြိုးကို မနှဈသကျပါဘူး ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိတဲ့ ယောကငြ်ျားမြိုးကိုသာ အားကိုးလိုစိတျ ရှိကွပါတယျ။
အမြိုးသမီးတှဟော ကမ်ဘာမွနေဲ့ နီးစပျတဲ့ ယောကငြ်ျားမြိုးကို အလိုရှိတကျပါတယျ။ ငတုံးလို ဟနျဆောငျပါဆိုတာက သငျဟာ တဈခါတဈရံ ပေါတောတောနဲ့ ခဈြစဖှယျ ကောငျးအောငျ နပွေတာမြိုးကို ဆိုလိုတာပါ ။ အမွဲတမျးဆိုရငျတော့ အထငျတောငျ သေးသှားနိုငျပါတယျ။
5. သငျဟာ ဘယျလိုလူမြိုးဖွဈတယျဆိုတာကို မလိမျပါနဲ့
သငျဘယျလို လူမြိုးဖွဈတယျဆိုတာကို ကောငျမလေးက သိထားသငျ့ပါတယျ ၊ ဒါမှ ရရှေညျမှာ အဆငျပွမှောပါ။
6. အမြိုးသမီးဆနျတဲ့ သငျ့အပွုအမူတှကေို သငျကိုယျတိုငျ လကျခံပါ
ဒါဟာ ဘာမှမမှားပါဘူး ၊ အမြိုးသားတှမှော အမြိုးသမီးဆနျတဲ့ အပွုအမူ စိတျနစေိတျထား အနညျးငယျရှိတကျပါတယျ ၊ ဒါဟာ သဘာဝပါပဲ ၊ ရှကျစရာမလိုပါဘူး။
7. အတိတျကို ခနျြထားခဲ့
သငျ့အတိတျမှာ ဘာတှဖွေဈခဲ့ ဖွဈခဲ့ ၊ သူမနဲ့ အနာဂတျသဈ စဖို့ကိုပဲ ပွငျဆငျထား သငျ့ပါတယျ။
8. သူမကို အလေးထားပါ
အမြိုးသမီးတှဟော သူတို့ကို အမြိုးသားတှကေ အလေးထား ဆကျဆံတာကို လိုခငျြကွပါတယျ ။ သူမစကားပွောတဲ့အခါ သခြောနားထောငျပွီး ပွနျလညျဆှေးနှေးတာမြိုး လုပျသငျ့ပါတယျ။
9. အဆကျအသှယျ ရအောငျလုပျပါ
သငျ့အနနေဲ့ သငျခဉျြးကပျမယျ့ ကောငျမလေးနဲ့ ရငျးနှီးမှုရဖို့ မလှယျကူဘူးဆို ၊ သူမ တကျတဲ့ သငျတနျးမြိုး လိုကျတကျပွီး နီးကပျမှုရအောငျလုပျပါ ၊ အခွားနညျးလမျးတှနေဲ့ သူမနဲ့သငျ့အကွား ဆကျသှယျမှုရအောငျ ကွိုးစားရပါမယျ။
10. ဖျောရှစှော ဆကျဆံပါ
သငျ့အနနေဲ့ ကောငျမလေးနဲ့ ခြိနျးတှတေဲ့အခါမြိုးမှာ ဖျောရှစှော ဆကျဆံတကျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ ၊ သငျတို့ကွားမှာ ငွိမျသကျတိတျဆိတျသှားတာမြိုး ဘယျတော့မှ အဖွဈမခံပါနဲ့
ကိုယ့်အကြောင်း မကောင်းပြောတဲ့ သူများနဲ့တွေ့အခါမှာ	February 7, 2016	0 comments ပိန်လွန်းလို့ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် နည်းလမ်းကောင်းမ...	February 7, 2016	0 comments Share this 0SHARESFacebookTwitterGooglePinterestRedditTumblr